Construction Machinery Sears Manufacturers & Suppliers - China Construction Machinery oche Factory
YJ03 Okomoko Electric Air Suspension Truck Driver Seats maka Construction
Model YJ03 Description Model YJ03 bụ a elu-edu nnọchi oche na ma ikuku ma ọ bụ n'ibu nkwusioru. Ezubere ka ị bụrụ ngwa ga - anọchi anya ngwa gị maka ngwa gị ka ị na-agbatị na nkasi obi na ọnụ ala. Atụmatụ: Achọrọ Nzukọ (oche na nkwusioru anaghị esonye) )dị na-adịgide adịgide ma ọ bụ ihe mkpuchi vinyl Họrọ n'etiti ikuku 12-Volt ma ọ bụ nkwusioru igwe na-egbutu ma dọọ vinyl maka ihe mkpuchi dị ala, nke dị jụụ Contoured foam cushions iji hụ na onye ọrụ nkasi obi Gbanwee .. .
YY23 Excavator oche digger
Mere họrọ anyị? 1) Anyị nwere ike ịnye gị ụdị oche oche dị iche iche maka nhọrọ gị. 2) Obere MOQ: 50pcs, mbuaha iji anabata, nnabata ikpe ikpe. 3) Anyị nwere ike ịnye ihe nlele maka ule gị. 4) Nchedo, nnyefe oge, mma dị mma na ọnụahịa asọmpi. 5) OEM & ODM ọrụ dị.